တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျတစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အစားအသောက်။အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်အစားအစာများ | တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Keto Diet
Keto Diet တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
25 မတ်လ 2021
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျသင်ယခုလိုချင်သည်ဆိုပါစို့တစ်ပါတ်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်အခမဲ့ဖြစ်သည်ထို့နောက်ဤအပိုင်း illuminated ဖြစ်ပါတယ်အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်မင်းအတွက်ပဲ။မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်ချေကာလအတွင်းအမည်ရတစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျအပြည့်အဝကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည်, ဒီမှာကဒီမှာနိုင်ပါတယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုရှာပါ, - သင်၏မိန်းကလေးများသည်အလွန်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်မလိုအပ်သောငွေများနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များ၌ဈေးကြီးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိဘဲတစ်ပါတ်တွင်တစ်ပတ်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်ဟုပင်သူတို့မယုံနိုင်နိုင်ကြသော်လည်း - လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်...
သို့သော်ပထမ ဦး စွာပိုလျှံအလေးချိန်မည်သည့်နေရာမှရောက်လာသည်၊ ကယ်လိုရီနှင့်သင့်မြည်းကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ကိုပထမ ဦး စွာသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အခြားပုံမှန်နည်းလမ်းများဆုံးရှုံးရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏အကူအညီဖြင့်စွမ်းအင်အဆင့်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအကျိုးဆက်ဖြစ်သော်လည်းအကျိုးဆက်အားဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်လာသောကြောင့်အကြောင်းမရှိဖယ်ရှားပစ် ... အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြချက်များပါဝင်သည်:အလွန်အကျွံစားအများကြီးအစာစားခြင်းဂျုံမှုန့်နှင့်ချိုမြိန်, ထိန်းချုပ်မှုအရူးအမူးအမြန်ပြင်အစားအစာနှင့်သင်တန်း၏တက်ကြွလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ရောဂါများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်။
ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသောသက်ရှိအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ထိုအခါရလဒ်သည်သင့်ကိုစောင့်မနေပါ - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်တယ်- သင်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာပင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတစ် ဦး ၏အလေးချိန်သည်တစ်နေ့တာအတွင်းမည်သည့်အစားအစာများကိုသောက်စားခြင်းနှင့်ရေသောက်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်လိုအပ်ပါတယ်? - ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုပါကမှတ်သားသင့်သည် - သင်၌စွမ်းအား၊ လိုချင်သောဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်သင်၏ပုံမှန်အကျင့်များကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤစမ်းသပ်မှုသည်အစာနှင့်အစာမစားမှီဤစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ပြီးသည်နှင့်မကြာမီသင်အကြိုက်ဆုံးဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်အခြားဝတ်စုံများထဲသို့ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ရာနောက်ဆုံးတွင်သင်နှစ်သက်သောလူ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုသင်၏အသစ်မွေးဖွားသောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများဖြင့်ထိတ်လန့်သွားစေနိုင်သည်။
သင်နောက်ဆုံးတော့သင့်ရဲ့စိတ်ကိုတက်စေလျှင်တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျနှစ်ဖက်စလုံးမှဝမ်းဗိုက်ပေါ်ရှိအဆီခွံများကိုဖယ်ထုတ်ပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ပုံသဏ္newာန်အသစ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ နောက်ဆုံး၌သင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အရာများအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သင့်ပုဒ်များ၌မိမိကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသောအမျိုးသားများအကြောင်း၊ ခြေတော်ရင်း၌ပြပ်ဝပ်။ ၊ဤအရာအားလုံးသည်ဇွဲရှိရှိ၊ လိုချင်တပ်မက်မှုတို့နှင့်အတူငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၏အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်လျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ကျလိမ့်မည်။
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် - အကြံပြုချက်များ
ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုစမလဲ? ။သင်၏အလေ့အထများကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားပါ၊ နေ့သစ်တစ်ခုလုံးကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်စတင်သင့်သည်။ သင်ယခင်ကကဲ့သို့မပြောင်းလဲဘဲမစားသင့်ပါ။အစပိုင်းတွင်အစာစားခြင်းအလေ့အထများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တကယ့်လိုအပ်ချက်များကိုခံစားရရန်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်သင်အကြိုက်ဆုံးအဝတ်အစားကိုလက်တွေ့တွင်သိသိသာသာကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်၊ သင်ဤပုံကိုကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့်ရည်မှန်းချက်ကိုလိုက်နာသင့်သည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုဆောက်လုပ်ခြင်းသည်အစပိုင်းတွင်အတွေးများနှင့်ရုပ်ပုံများပေါ်ပေါက်လာသည်။ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ပြီးအချိန်ယူပါ။ကိန်းဂဏန်းများအရအမျိုးသမီးတိုင်းသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်နှစ်လုံးသူမ၏ဗီရိုမှ ၀ တ်စုံကိုရွေးချယ်သည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစားအစာရွေးချယ်ရန်စဉ်းစားပါ၊ ထို့နောက်သင်သည်အားနည်းချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသောဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အစားအစာကိုခံစားပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာအဲဒီအချိန်ကတည်းကပဲသင်လိုချင်တာကိုသာစားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးသင့်အစားအစာကိုပျော်မွေ့နိုင်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။၎င်းသည်ကန့်လန့်နေသောအ ၀ တ်အစားများအစားပွင့်လင်းသောပိတ်ချောနှင့်တူ၏ - ပြီးနောက်, သင်ကစိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်သည်။ထိုနည်းတူစွာ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဟင်းပွဲများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူခံစားမှုများကိုနားထောင်သည်။မှတ်သားသင့်သည်မှာလူ့ဇီဝသက်ရှိသည်တိုင်းတာ။ မရသောအသားအရေအတွက်၊ တိရိစ္ဆာန်အသေကောင်များကိုစုပ်ယူရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ပconflictsိပက္ခများဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလေးချိန်ပိုများသည်။
အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ပါ - အကယ်၍ သင်၏ပုံမှန်အစားအစာကကိုယ်အလေးချိန်တက်လာလျှင်၎င်းသည်မှားသည် - ၎င်းကိုမမေ့ပါနှင့်၊ အခြားကျန်းမာသောအစားအစာများစွာလည်းရှိသည်။အစားအသောက်အစီအစဉ်များ... သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဟင်းလျာများနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်အရာရာတိုင်းနှင့်ဝေးလံလှသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားစမ်းပါ။ကြီးမားသောစူပါမားကတ်သို့သွားပြီးပြတင်းပေါက်များကိုလေ့လာပါ။ အောက်ပိုင်းစင်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအထုပ်များပေါ်တွင်ထိုင်ရန်၊သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှလျှင်အစားအစာအသုပ်နှင့်ပင်လယ်စာ, ဒီဟင်းလျာများ၏အရသာစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။အမြဲတမ်းနည်းနည်းချက်ပြုတ်ပါ၊ အနည်းငယ်ဆာလောင်နေစေရန်အစာစားပါ။ hypermarket မှတဆင့်ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အားကစားရုံသို့တစ်ခေါက်သွားသောကယ်လိုရီအသုံးစရိတ်နှင့်ညီမျှလိမ့်မည်။
ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ဖက်ရှင်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်စေကူညီသောကြောင့်လေးလံသောဝန်များနှင့်ကန ဦး အဆင့်များတွင်ပြေးခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကုန်ခန်းရန်မသင့်ပါ။ အကြောင်းမှာသက်ရှိတစ်ခုစီသည်ထူးခြား။ ယေဘူယျနည်းများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသည်အမှန်ပင်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်သာယာပြီးချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာသာလျှင်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ညနေခင်းတွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ တီဗီရှေ့တွင်အိပ်ရာခင်းခြင်း၊ ရေကူးကန်ထဲ၌ရေကူးခြင်းသို့မဟုတ်ကခုန်ခြင်းသည်အသုံး ၀ င်သည်။ နေရာထိုင်ခင်းနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကိုနားထောင်စဉ်သို့မဟုတ်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်နေစဉ်သင်၏ခြေထောက်များကိုလှဲချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သင်ပြီးနောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးခံစားမှုရှိနေသရွေ့သင်ပြုလုပ်သည့်အရာသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။(သို့) သင့်မိသားစုဝင်များကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အနှိပ်ခံခြင်းနည်းစနစ်ကိုသင်စတင်သင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားများစွာရွှင်လန်းစေမည်၊ သို့မှသာသင်သည်ပိုမိုရွေ့လျားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့ချောချောမွေ့မွေ့သွားနိုင်သည်။
ရွေးချယ်မှုသည်များသောအားဖြင့်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။. . . သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ကိုသာမကပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိရပါတစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျအသစ်တစ်ခုကိုမင်းရဲ့ဘဝပုံစံထဲယူဆောင်လာဖို့၊ လက်ထပ်ဖို့တောင်ရှေးခေတ်ကတောက်ပဖို့၊ရလဒ်ကတော့မကြာခင်မှာထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခင်မှာသင်ဟာအားအင်ပြည့်ဝပြီးလှပပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာရေကူးဝတ်စုံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စတိုင်တွေကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အစားအစာအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအပြုံးနဲ့လျစ်လျူရှုပါ။
တစ်ပါတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် - မြန်မြန် +
အများဆုံးကိစ္စများတွင်သိသိသာသာရန်လျှင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ် (သို့) ၅ ကီလိုဂရမ်ပိုများသွားလျှင်၊ တစ်ပါတ်လောက်လုံလောက်သည်. . . ဒီအတွက်သီတင်းပတ်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသို့သီးသန့်ကူးပြောင်းရမည်။ဤနေရာတွင်အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီးတစ်နေ့လျှင် 1. 5-2 kilograms သုံးစွဲရန်လုံလောက်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မျက်နှာ၏အရေပြားအခြေအနေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုထိရောက်စွာအချိန်ဖြုန်းနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီသောအသီးများကိုရွေးချယ်ပါ။ အနည်းဆုံးဤဒေသရှိထိပ်တန်းအာဟာရပညာရှင်များကအကြံပြုသည်။
ပေါင်းစပ်အရေပြားမှပုံမှန်သည်နှစ် ဦး စလုံးပြုလိမ့်မည်, အဓိကအရာကအားလုံးအတူတကွဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုပြင်းထန်စေရန်ညနေတိုင်းနွေးထွေးသောရေချိုးသင့်သည် - ရုတ်တရက် hydromassage မရှိလျှင်၎င်းထဲတွင်ပျင်းရိစွာမနေပါနှင့်။အပေါ့ပါးဆုံးမိမိကိုယ်ကိုအနှိပ်ခံခြင်းပင်လျှင်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင် ၁၅ မိနစ်သာအချိန်ယူရမည်။
အခြားတစ်ရက် (တစ်ပါတ် ၂-၃ ကြိမ်သာ) မျက်နှာ၊ လည်ပင်းနှင့်décolletéအတွက်တဆေးမျက်နှာဖုံးများပြုလုပ်ရန် - နွေးသောနို့သို့မဟုတ်ရေတွင်လတ်ဆတ်သောတဆေးကိုရောပြီးအရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းပါ။10-15 မိနစ်အကြာတွင်နွေးရေနှင့်ဖယ်ရှားပါ။သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွားများသည်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်နံနက်စာအတွက်ဒိန်ခဲ ၄၀ ဂရမ်ပါသောမချိုသောလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုသောက်ရန်အကြံပေးသည်။နေ့လည်စာ၌သူတို့ထင်မြင်ချက်တွင်ကြက်ဥတစ်လုံး၊ အခြောက် ၁၂၀ ဂရမ်ရှိသောအသားများနှင့်ဒိန်ခဲ ၂၀ ဂရမ်ပါဝင်သင့်သည်။နေ့လည်စာစားရန်အတွက်လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီနှင့်ညစာအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီရှိအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ် ၁၂၀ ဂရမ် (လတ်ဆတ်သည်) ။
သူတို့ကဒီလို ၇- ရက်ကြာတဲ့အစာအာဟာရကိုစားပြီးနောက်မှာ၊
တစ်နေ့လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျ - အစွန်းရောက်အစားအစာ
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်အတွက်မည်သည့်ပြိုင်ဆိုင်မှုမျိုးမဆိုကဲ့သို့ပင်အလွန်အစွန်းရောက်သောနည်းလမ်းများရှိသည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အချိန်မရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အချိန်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တစ်ရက်တည်းမှာပဲကီလိုဂရမ် ၂ လုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းပညာကရိုးရှင်းပါတယ်၊ အစားအစာမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက်လက်ဖက်ရည်ပဲ။ဒါကိုဒီလိုပြင်ဆင်ထားတယ် - အနာဂတ်သောက်စရာတစ်လီတာအတွက်လက်ဖက်ရွက်တစ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းလိုအပ်တယ်။နို့ပူကိုထည့်ပြီးလျှင်မိနစ် ၃၀ ထားပါ။ဒါဟာ thermos အတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့သာ။ ကောင်း၏။သို့သော်လက်ဖက်ရည်ပူသို့မဟုတ်အအေးသောက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ၊ အဓိကမှာအဘယ်အရာကိုမျှမစားရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအောင်မြင်ရန်ခွန်အားမခံစားရပါကဤနေရာတွင်ပိုမိုနူးညံ့သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အလတ်စားပန်းသီး ၄ လုံး၊ သံပုရာတစ်မျိုး၊ ၁၀၀ ဂပိန်သောအမဲသားတစ်ပြားနှင့်ကောက်ကောက် ၃ လုံးကိုတစ်နေ့လုံးဆန့်ထုတ်ပါ။ထိုကဲ့သို့သောတစ်နေ့ပြီးနောက်တွင် ၀ တ်စုံသို့ ၀ င်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါကသင်သည်အခြားတစ်ရက်အတွက်အငတ်ဘေးကြုံရလိမ့်မည်။နှစ်သစ်ကူးအကြိုနှစ်ရက်သာလျှင်ဤစာမေးပွဲကိုသင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်အားအကြံမပေးပါ။အနည်းဆုံး ၃ ရက် ကြိုတင်၍ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသည်။ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့မှာအသုပ်များနဲ့သစ်သီးများကိုစားပါ။
ပွဲမတိုင်မီနှစ်နာရီအလိုတွင်၊ထိုအခါသင်သည်အစာကိုအပေါ်ထိချင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အစာမစားဘဲကောင်းမွန်စွာစားနိုင်သည်။နှင်းပျော့ပျော့ပျောင်း။ ထိရောက်မှုနည်းသောဆေးတစ်လက်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာကိုစားသုံးပါ၊ တစ်အစားအစာကိုစားပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာကိုရွေးချယ်ပါ။ဥပမာ - တနင်္လာနေ့ - ငှက်ပျောသီး ၅ ခု၊ အင်္ဂါနေ့။ ။ဤရက်သတ္တပတ်အတွင်း၊ သငျသညျလွင်ပြင်ရေကိုသောက်နိုင်ပြီးကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်အထူးသဖြင့်သကြားရှိသူများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ခန်ဓာကိုယ်၏ဟန်ချက်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်ဗီတာမင်များကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။
Mono-dietary အာဟာရသည်အူသိမ်ကိုသာမကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအဆိပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအလေးချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများကိုတစ်ပါတ်ကြာမျှမပြုလုပ်သင့်ပါ။ဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ၃ ကီလိုဂရမ်မှ ၈ ကီလိုဂရမ်အထိဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။သို့သော်ထိုသို့သောရက်သတ္တပတ်ကိုအစအပတ်ဟုသာခေါ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်တွင်သင်အစာအာဟာရကိုသေချာစဉ်းစားပြီးဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ရမည် (ပရိုတင်းများ၊ အဆီများ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ၊ အမျှင်များ) ။
9 ကီလိုဂရမ် - တစ်ပါတ်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်5-သငျသညျထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်သက်သေပြဟင်းချိုစာရွက်ကိုသုံးနိုင်သည်အစာမစားဘဲမျှမျှတတစားခြင်းမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှင်မြန်စွာလျော့ကျနိုင်သည်။ဒီကိုယ်အလေးချိန်အစားအစာ၏အဓိကဟင်းချက်သည် -ဟင်းချိုဖြစ်နိုင်သည်အသုံးပြုသည်မည်သည့်အရေအတွက်၌။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်များနိုင်သမျှများများရရန်အတွက်၊ အောက်ဖော်ပြပါရက်အနည်းငယ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောအစားအစာများကိုအတိအကျစားရန်အကြံပြုပါသည်။ထို့အပြင် - ချသီတင်းပတ်ရလဒ်တစ်ခုရလိုလျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြန်လုပ်နိုင်သည်။
ချက်နည်း - ဟင်းချိုမှုန့်
"အံ့ဖွယ်ဟင်းချို" အောင်သည်ပါးလွှာသည်လိုအပ်လိမ့်မည် -
အများအပြားခရမ်းချဉ်သီး 2-3 အပိုင်းပိုင်း
သေးငယ်တဲ့ဂေါ်ဖီထုပ် 1- အပိုင်းအစ
ဆလရီ 1 စည်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည် 1 တုံး။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအတော်လေးထုပြီးရေဖြည့်ပါ၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအပူချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင်ပြုတ်ပါ။ ထို့နောက်ချက်ပြုတ်သည်အထိအပူကိုလျှော့ချပြီးချက်ပြုတ်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အစားအသောက်ဟင်းချို၌တည်၏- သင်အနည်းဆုံးကယ်လိုရီအနည်းဆုံးရှိသည်၊ ၎င်းကိုသင်တတ်နိုင်သမျှစားသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်စာရင်းထဲတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားကျန်းမာသောအစားအစာများနှင့်သင်၏အစားအစာကိုဖြည့်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဟင်းချို+ မည်သည့်အသီး (ငှက်ပျောသီးမှအပ) + လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ ရေ
ဟင်းချို+ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်စည်သွတ်ဘူး) + အစိမ်းရောင်။ပဲ၊ ပြောင်းနှင့်ပြောင်းများကိုခြောက်သွေ့ခွင့်မပြုပါ။နေ့လည်စာအတွက်၊ ဖုတ်ထားသောအာလူးများကိုသင်စားနိုင်သည်။ရေသောက်ပါ
ဟင်းချို+ သစ်သီးများ (ငှက်ပျောသီးမှအပ) + ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (အာလူး၊ ပဲပင်များ) + ရေ
ဟင်းချိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ + သစ်သီးများ (ငှက်ပျောသီးကိုခွင့်ပြုသော်လည်း ၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော) + နို့ + ရေ
ဟင်းချို+ 300-600 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။အမဲသား (ပြုတ်သို့မဟုတ်ဖုတ်) + ခရမ်းချဉ်သီး (လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်စည်သွတ်ဘူး) + ရေ (6-8 မျက်မှန်)
ဟင်းချို+ 500 ဂရမ်။အမဲသား + ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (အာလူးမှအပ) + ရေ
ဟင်းချိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ + ဆန်ညို + သစ်သီးဖျော်ရည် (မချိုမြိန်) + ရေ
သီတင်းပတ်၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၊ အစားအစာ၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည်အဆီအလေးချိန် ၂ ကီလိုဂရမ်မှ ၃ ကီလိုဂရမ်အထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး အကယ်၍ သင်ကအစားအစာကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါက၊သီတင်းပတ်နိုင်လိမ့်မည်5-9 ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်...
ထုတ်ကုန်များကိုအဆီများများထည့်။ ကြော်။ မချက်နိုင်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်မြန်လေလေရလဒ်မတည်ငြိမ်လေလေဖြစ်သည်။- သင် ၃ ရက်၌ပင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်၊ သို့သော်အမှန်မှာရူပဗေဒနိယာမများကိုမည်သူမျှပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။သို့သော်အခြေအနေများသည်ဤသို့သောနည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည် - ခဏအကြာတွင်သင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်။ထိုအခါဤအချိန်တွင်အကြေးခွံတစ်ခုမလိုချင်တဲ့ရလဒ်ဖေါ်ပြခြင်း, စကေးပယ်သွားပါ။ဟုတ်ပါတယ်၊ အောင်မြင်သောလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုလမ်းပေါ်တွင်ရှိလျှင်သင်သည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စအတွက်အမျိုးသမီးလိင်သည်အလွန်အမင်းအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်လုပ်ရပ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်ရွေးချယ်စရာမလိုတော့ပါ။ဒီဟာကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ကံကြမ္မာကိုတစ်ခါတစ်ရံသိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်မလိုလားအပ်သောအကျိုးအမြတ်အချို့ကိုအသုံးချရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများစွာကိုဤနည်းအတိုင်းပြုလုပ်ကြပါစို့။အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်နည်းစနစ်...
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောခေါက်ဆွဲအဖြစ်ဘုံထုတ်ကုန်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။... ၎င်းတွင်ချစ်ပ်များ၊ ကိုလာ၊ စည်သွပ်ဘူးများ၊ဤအရာအလုံးစုံကိုသန့်စင်ပြီးဘယ်နေရာမှာကောင်းသောအစားအစာ။ရေရှည်သိုလှောင်မှု၏အကျိုးစီးပွားအတွက်, ကိုယ်အလေးချိန်ကိုယ်အလေးချိန်ကြံ့ခိုင်ရေးအမျိုးသမီးတစ် ဦး လုံးဝဆန့်ကျင်သောဤထုတ်ကုန်များတွင်အရာများစွာကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်ပါတ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း - တစ်လမ်း (အဆီနည်း)
တစ်ပတ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂၅ ဂရမ်ထက်မပိုသောအဆီအမျိုးမျိုးသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်အကြံပြုသည်။၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်လျှော့တွက်ထားသောပမာဏဖြစ်သည်၊သို့သော်တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်ဤနည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။
အသားဟင်းလျာများ၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ သံလွင်ဆီ၊ တိရိစ္ဆာန်အဆီများ၊ မာဂျင်၊ အခွံမာ၊ သကြားလုံး၊ဆေးဆိုင်တစ်ခုမှငါးဆီဝယ်ပြီးမနက်၌ဇွန်းတစ်ဇွန်းနှင့်ယူပါ။ဒါကတစ်နေ့လုံးအတွက်သင့်ရဲ့စံပဲ။အကယ်၍ ငါးဆီလုံးဝမကိုက်ညီပါကလတ်ဆတ်သောညှစ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကိုစျေးကွက်ထဲတွင် ၀ ယ်ယူပြီးဇွန်းတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် ၂ လမ်း (သကြားလုံးများနည်း)
အဆီသို့မဟုတ်အသားမဟုတ်သောအရာ, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်ကြသည်။သစ်သီးများ၊ သကြားလုံးများ၊ ပျားရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ စီရီရယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့်! ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်မတူညီပါ။ ချိုသော (ပျားရည်သို့မဟုတ်သကြားကဲ့သို့) နှင့်လုံးဝမွှေးကြိုင်သော (oatmeal သို့မဟုတ်သခွားသီးကဲ့သို့) ။မီးကဲ့သို့သောချိုသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုကြောက်ပါ။သကြားလုံးများသည်အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုအစွမ်းထက်စွာထုတ်လွှတ်သည်။ကောင်းပြီ၊ သူဟာအနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီသွပ်သွင်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။သင်အင်ဆူလင်များများများများလေလွှတ်လေလေ၊သို့သော်ဆန်သို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်မွေးများသည်သင့်အားထိုကဲ့သို့သောအရာများဖြင့်မခြိမ်းခြောက်ပါ။ဒါပေမယ့်နို့ကသင့်ကိုလန်းဆန်းစေတယ်။မချိုမြိန်သော်လည်း၎င်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသကြားဓာတ် Lactose ပါရှိသည်။နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုမသောက်ရသေးဘူး။
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် - ၃ လမ်း (ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လျော့နည်း)
သင်၏နေ့စဉ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပါ! ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအရည်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသင်အလေးချိန်လျော့ကျသွားလိမ့်မည်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိတ်လန့်စေသောဤနည်းလမ်းသည်တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအစားအစာကိုဆက်စားရန်သင်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်ချေရှိသည်။စွမ်းအင်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေသောသက်ရှိတစ်ခုသည်စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အရေးပေါ်အရေးပေါ်ရွေးစရာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ခွန်အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း - သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေသောအရာဖြစ်သည်။သို့သော်၊ သင်သည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်တစ်လသို့မဟုတ်တစ်လခွဲကြာနိုင်သည်။နောက်တစ်ခုကအနည်းဆုံးဆန်အနည်းငယ်စားသင့်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ဘယ်မှာစွမ်းအင်ရမလဲ။
တစ်ပါတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် -4လမ်း (ပိုမိုလှုပ်ရှားမှုများ)
သင်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အလုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်ညနေပိုင်း၌လေ့ကျင့်ပါ။တစ်ညတာသွားစက်ကိုတစ်နာရီကြာတွားသွားမည့်အစား၊ ၎င်းကိုမိနစ် ၂၀ ခန့်လေ့ကျင့်ပါ၊ ထို့နောက်ဘဲဥပုံလေ့ကျင့်ဆရာကို ၂၀ မိနစ်၊ ထို့နောက်လှေလှော်စက် (နောက်ထပ်မိနစ် ၂၀) သို့ပြောင်းပါ။ထို့အပြင်အေရိုးဗစ်အဆင့်တစ်ခုစီ၏ပြင်းထန်မှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သင့်သည် - အမြင့်ဆုံး ၉၀% ထက်မနည်းပါ။
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် - ၅ လမ်း (ပရိုတင်းများ)
ပရိုတိန်းသည်သင်၏ကြွက်သားအစာဖြစ်သည်. . . ၄ င်းတို့ကို" ကျုံ့ခြင်း" မှကာကွယ်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏တစ်ကီလိုလျှင် ၁. ၆ ဂရမ်သို့နေ့စဉ်ပရိုတင်းကိုစားသုံးပါ။သို့သော်အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်အသားဟင်းလျာများမှာအဆီများလွန်းနေသည်။ဒီအခြေအနေမှာဘာလုပ်ရမလဲ။အဖြေတစ်ခုရှိတယ်၊ သင်ပရိုတိန်းအမှုန့်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်။မင်းရဲ့နေ့စဉ်ဆေးကိုမှန်မှန်ချိန်ဖို့လိုတယ်။ကော့တေးကိုရေထဲတွင်အရည်ပျော်အောင်သွန်းလောင်းပါ။ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများသည်သင်နှင့်အတူ thermos ယူရန်ဖြစ်သည်။၂. ၅ - ၃ နာရီမှနားချိန် ၅-၆ ဖြင့်ကော့တေးကိုသောက်ပါ။တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ပြုတ်ငါးများကိုစားပါ။
တစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် - ၆ လမ်း (ရေပို) ။
ရေသည်အသက်ဖြစ်သည်- ပိုလျှံသောရေ - ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု။သင်ပိုမိုအသုံးပြုလေရေများများလေသင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအထူးသဖြင့် adrenal gland များပိုမိုဖိစီးလေလေ၊ဒီအရာကဒီဟော်မုန်းတွေကအဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်။ထို့ကြောင့်ရေသည်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လုံးဝအစားထိုးမရသောအရည်တစ်ခုဖြစ်သည်အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်. . . ဒါပေမယ့်ဒါကမဟုတ်ပါဘူး။သင်ပရိုတိန်းများများစားလေလေသောက်လေလေဖြစ်သည်။သင်၏နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးကိုသင်ကြိုက်သလောက်တိုးမြှင့်သော်လည်းအနည်းဆုံးရေ ၂. ၅ လီတာဖြင့်တိုးမြှင့်သင့်သည်။သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်း၊ သင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီနှင့်သင်နိုးသည့်အချိန်နံနက်ပိုင်းနှင့်နေ့လည်ပိုင်းတို့တွင်ရေတစ်ခွက်မှနှစ်ခွက်သောက်သုံးရန်ကြိုးစားပါ။ (သင်အနည်းဆုံးရေအနည်းဆုံး ၁၀ ခွက်သောက်ရန်လိုအပ်သည်) ) ။
အရေးကြီးတယ်!: - သာရေသာအကြံပြုသည်။
တစ်ပါတ်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန် - ၇ လမ်း (အစားအစာကယ်လိုရီပါဝင်မှု)
ဒီပါးလွှာတဲ့နည်းလမ်းသည်အစားအစာရဲ့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကိုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲပစ်မယ်၊ တွက်ချက်မှုတွေနဲ့သင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါဟာတန်တယ်။အစားအစာများ၏စွမ်းအင်ပါဝင်မှုကိုလမ်းညွှန်ပြီးသင်၏အစားအစာ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကိုတွက်ချက်ပါ။စားပွဲဝိုင်းကိုရှာဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်အဓိကအစားအစာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကယ်လိုရီတွေအားလုံးကိုတင်ပြထားတဲ့ Kremlin အစားအစာအပိုင်းမှာမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံအပြည့်ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်နုတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အစာစားခြင်း. . . ဥပမာအားဖြင့် ၃ ရက်ဆက်တိုက်ကယ်လိုရီ ၁၅၀၀ ကို ၄ ခါမျှစားသုံးပါ။ထိုအခါ 1, 900 ကယ်လိုရီအထိသွားပါ။- တစ်ရက်သာဖြစ်သည်။ပြီးရင်နောက် ၃ ရက်ထပ်ပြီး ၁၅၀၀ ကယ်လိုရီကိုပြန်သွားပါ။အခြေခံဖော်မြူလာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ထိုကဲ့သို့သောဇီဇဇတ်ဓာတ်စာ၏အဆင့်သည် ၃၀၀-၅၀၀ ကယ်လိုရီမဟုတ်သင့်သော်လည်းမနည်းပါ။အကယ်၍ သင်သည်လုံးဝမောပန်းပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားရပါကသင်၏သံသရာအတွင်းရှိ" ဆာလောင်မွတ်သိပ်သော" ရက်အရေအတွက်ကို ၂ သို့လျှော့ချရန်ကြိုးစားပါ။
တစ်ပတ်လျင်မြန်စွာ - 8 လမ်း (အပိုများ)
ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှနီးပါးမစားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီတာမင်များ၊ ဓာတ်သတ္တုများနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအရာများအလုံအလောက်မရရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ဒါကြောင့် multivitamin နှင့် multimineral complex ကိုဝယ်ဖို့လိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အမှုန့်ဖိုင်ဘာဝယ်ယူရန်နှင့်ပရိုတိန်းတုန်လှုပ်ထည့်ပါ။အစားအစာဖြည့်စွက်ချက်များအရအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဂလူးတမ်မင် (အမှုန့် (သို့) တောင့်) တွင် ၀ ယ်သင့်သည်။နှင့်ကဖိန်းဓာတ်နှင့် ephedrine အပေါ် thermogenics လုံးဝမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုDiuretics ဆီး - ရှိသည်။သို့သော်သူတို့နှင့်ပြက်လုံးသည်ဆိုးသည်။ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီလေးနက်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ယူလျှင်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Diuretics ဆီး။
တစ်ပါတ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း - ၉ လမ်း (ဆားနည်းနည်း)
သက်သေပြနည်းလမ်းလျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ခန္ဓာကိုယ်မှပိုလျှံရေထုတ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ဆိုဒီယမ်သည်ရေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်းသည်ဆားငန်သောအစားအစာများကိုသာစားရန်လိုအပ်သည်။ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်လုံးဝမဟုတ်ပါ။ချဉ်၊mayonnaise, ketchup, mustard, sauces and dressings တွင်ဆားများစွာရှိသည်။ထို့အပြင်ဆိုဒီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ထုတ်ကုန်များစွာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ဥပမာအားဖြင့်, ချစ်ပ်။တံဆိပ်ကပ်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ဆိုဒီယမ်ဆားပါဝင်သောထုတ်ကုန်များသည်သင့်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်မသင့်တော်ပါ။အိမ်တွင်မည်သည့်အရာမျှဆားမထည့်ပါနှင့်။အစားအစာတွင်ဆားကိုအပြည့်အ ၀ စွန့်ပစ်ခြင်းသည်အပိုလေးပေါင်အထိယူသွားနိုင်သည်။
အားလုံးထက်လျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်နည်းလမ်းများခြောအထိတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်ကူညီလိမ့်မယ်ရက်သတ္တပတ်များကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကူညီပါသို့သော်သင်သည်ဤနည်းစနစ်များကိုအလွဲသုံးစားပြုလျှင်အရေးပေါ်ကိုယ်အလေးချိန်, ထို့နောက်သူတို့ကအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။သင်၏အစားအစာ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည်ပုံမှန်လူနေမှုပုံစံအတွက်အနည်းဆုံးခွင့်ပြုချက်မရသောကြောင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည်နှေးကွေးသည်။သင်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၀. ၅ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုမိုသောအဆီများနှင့်အတူဆုံးရှုံးသွားသည်ဟုသင်ယူဆပါကမလွှဲမရှောင်သာကြွက်သားထုကိုဆုံးရှုံးသည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်သင့်တွင်ကြွက်သားနည်းလေလေအဆီပိုများလေဖြစ်လိမ့်မည်။
နက်နဲသောအရာသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကြွက်သားများသည်အလွန်တက်ကြွစွာစားသုံးသည်နှင့်သင်ကြွက်သားထုကိုလျှော့ချလိုက်လျှင်ပုံမှန်ထက်ကယ်လိုရီလျော့နည်းရန်လိုအပ်သည်။ဒီဗားရှင်းမှာတော့အောက်ပါရုပ်ပုံထွက်ပေါ်လာတယ် - အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အခါသင်ဟာနည်းနည်းစားဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမဲ့၊ သင်မှန်းတဲ့အတိုင်း၊ ဒီအချိန်မှာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှေးကွေးသွားတာကိုသင်ခန့်မှန်းထားသလိုကယ်လိုရီပါဝင်မှုလျော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်ကဆိုးစက်ဝိုင်းထွက်လှည့်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အကယ်၍ သင်သည်" အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း" ကိုအဆက်မပြတ်စားလျှင်ရေရှည်တွင်၎င်းသည်သင့်အဆီသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အနေဖြင့်အလေးချိန်ကိုသာတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
11 မေလ 2021
Diet Favorite - ထုတ်ကုန်များစာရင်းနှင့် ၅၊ ၇ နှင့် ၁၄ ရက်တို့အတွက်အသေးစိတ်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
သင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်မျှကီလိုဂရမ်သင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။အရက်သောက်ခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်ပရိုတင်းဓာတ်နေ့များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၅၊ ၇၊ ၁၄ ရက်နှင့်တစ်လအတွက်အသေးစိတ် menu တစ်ခု။အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာမှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက် Buckwheat diet: menu, results, အကြံပြုချက်များ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် Buckwheat diet၊ အစားအစာဆိုတာဘာလဲ၊buckwheat diet၊ ခွင့်ပြုထားသောသောက်စရာများ၊အစားအစာအမျိုးအစားများ၊ အစားအစာမီနူးများ၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ၊အစားအစာ၏ရလဒ်ကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်၊
14 ဇန်နဝါရီလ 2021
အမိန့် Keto Diet 50% လြှော့ခွငျး
2021 © မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး